बालुवाटारको जग्गा लुटमा हाइप्रोफाईल कनेक्सन, देउवाको कनेक्सन खोज्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पनि शंकाको घेरामा – Mission Khabar
बालुवाटारको जग्गा लुटमा हाइप्रोफाईल कनेक्सन, देउवाको कनेक्सन खोज्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पनि शंकाको घेरामा
मिसन खबर १७ बैशाख २०७६, मंगलवार १०:४४
काठमाडौं– बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि नाम मुछिएको छ । वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसदमा आवाज उठाउने देउवाको नाम वाइडबडी खरिदमा जोडिएपछि कारबाही प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो । उनै देउवाले सोमबार संसदमा बालुवाटार जग्गाको विषयमा आवाज उठाए । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानमा देउवाको जिम्मेवारी समेत रहेको देखिएको छ ।
२०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्दा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए देउवा । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण बारे छानविन गर्ने काम अघि बढाएको थियो । गृहमन्त्रालयले पाएको जिम्मेवारीमा देउवा पुगेपछि यो अनुसन्धान यतिकै सेलायो । सरकारले दिएको निर्देशन र कार्यदेशअनुसार गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेको भए १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने अवस्था नै आउने थिएन् । तत्कालिन समयमा गृह मन्त्रालयले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना बारे किन अनुसन्धान गरेन ? मन्त्रीका हैसियतामा शेरबहादुर देउवाले कदम नचाल्नुले कतै उनकै मिलेमतोमा वा लाभ लिएर माफियालाई बचाउन त खोजिएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिनुलाई स्वभाविक मानिएको छ ।
यता, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा भएका केही निर्णय पनि शंकास्पद देखिएका छन् । पूर्व सचिव छानविनको दायरामा तानिइसकेका छन् । विगतदेखी वर्तमानसम्म को प्रधानमन्त्री, कुन—कुन मन्त्री र कर्मचारीले गल्ती गरे ? किनबेचमा क—कस्को साँठगाँठ देखियो ? सबैमाथी अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । बालुवाटार अतिक्रमण एक दुई जनाको आँटले मात्रै सम्भाव भएको छैन । यसका सबै मतियारलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुन्न । चाहे आफ्ना परुन चाहे पैसा र शक्तिवाला बदमास सबैलाई कठघरामा उभ्याइयोस् ।